Lafta Gareen oo xilka ka qaadey gudoomiyihii Sh/Hoose | KEYDMEDIA ONLINE
Lafta Gareen oo xilka ka qaadey gudoomiyihii Sh/Hoose
Waa markii labaad oo C/qaadir Siidii xilka loo dhiibo, iyadoo gobolka aan wali ka jirin wax isbedel ah dhinaca amaanka iyo horumarka dhaqaale.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa xilka gudoomiyaha Shabeellaha Hoose ka qaadey Ibraahim Najax, oo mudo ka yar labo sano xafiiska joogey, isagoo ku bedelay gudoomiye hore, oo ay isku beel yihiin.
Najax ayaa labo jeer soo qabtay xilkaan, oo maanta loo magacaabey C/qaadir Maxamed Nuur Siidii oo isaga laftiisu xilkan horey usoo qabtay, isagoo lagu xasuusto inuu horkacayay dagaalkii Al-Shabaab looga saarey Baraawe.
Lafta Gareen ma uusan fahfaahin sababta uu isbedelka ugu sameeyay hogaankii gobolka, balse waxay kusoo beegmaysaa xili Al-Shabaab ay mudooyinkii dambe kusoo xoogeysanayeen degaanno dhowr ah.
Dadka degan gobolka waxay sheegeen inuusan jirin wax horumar ah oo maamullada la isku bedelayo ay keenayaan, maadaama ay jiraan dhibaatooyin aan waxba laga qaban, oo abaaraha, fatahaadaha, dagaallada soo noq-noqday iyo amni la'aanta kamid yihiin.
0 Comments Topics: koonfur galbeed lafta gareen shabeellaha hoose
Madaxweynaha KG oo Maxkamad lasoo taagayo
Warar 25 August 2021 9:52
Mid ka mid ah beelaha dega Koofur galbeed, ayaa ku dhawaaqay in ay maxakamad la tiigsan doonaan Madaxweynaha maamulkaas Cabdicasiis Laftagareen.
Lafta-Gareen oo soo saarey liiska Musharixiin oo laga sugayay
Warar 14 August 2021 10:28
Lafta-Gareen oo aaday dal aan looga baran Madaxda Soomaalida
Warar 5 July 2021 10:25